U8661 တွေမှာ Update Fail ဖြစ်တာကိုရှင်းနည်း
U8661 တွေမှာ Firmware တင်ရင် Update Fail ဖြစ်တာကိုဒီနည်းကိုရှင်းနိုင်ပါတယ်.. U8661 တွေကနောက်ပိုင်းဝင်တဲ့အလုံးတွေက Software ပျက်တာလဲများတယ်…. ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့အရင်ဖြေရှင်းလိုက်ပါ…ရိုးရှင်းပါတယ်… CWM ကနေ Restore လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ… Backup လုပ်ထားတဲ့ Firmware ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်…. မြန်မာဖောင့်ထည့်ပြီးသာ….Frozenkeyboard ပါထည့်ပေးထားတယ်.. အဆင်ပြေမှာပါ… ပထမဆုံး CWM လေးကိုအရင် Download လုပ်ပါ. U8661 CWM.exe ပြီးရင်ဒါလေးကို Download လုပ်ပါ… U8661 Back up ပြီးရင်တော့ Restore လုပ်လိုက်ပါ.. CWM ကနေလုပ်ရမှာပါ…. CWM သွင်းနည်းတွေကိုတော့အသေးစိတ်မရေးပေးတော့ပါဘူး…. ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ… http://myanmarmobilesoftwaredeveloper.com/?p=3583 Restore လုပ်နည်းကတော့ ဒေါင်းပြီးတဲ့ဖိုင်ကို Extract လုပ်လိုက်ပါ… Clockworkmod […]
ဒေါင်းထားလိုက်ပါ….. ဒါလေးကတော့နောက်ဆုံးထွက် C8950D Firmware လေးပါ…. လိုချင်သူတွေယူသွားပါ.. C8950D,Android 4.0,V100R001C92B948,中国电信）.zip Root လုပ်ချင်တဲ့သူများဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ။ http://myanmarmobilesoftwaredeveloper.com/?p=3606
Y200T လိုချင်သူတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်… Link မသေခင်မြန်မြန်ဒေါင်းထားပါ.. Huawei Y220T Firmware
Huawei offical firmwares
ALL DEVICE HUAWEI OFFICAL FIRMWAREW www.huaweidevice.com/cn/downloadCenter.do?method=index&directoryId=3372&treeId=0&type=software
Ascend D1-U9500-1 (Android 4.0.3) V100R001CHNC00B118(Generic Version)(Official Shipped Version) Ascend D1 (U9500-1, Android 4.0) V100R001CHNC00B122 (Generic Version) Ascend D1 (U9500-1, Android 4.0) V100R001CHNC00B126 (Generic Version) အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ…. စိုင်းခိုင်တင့် ([email protected]) လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ဝေဖန် အကြံပြုချက်တွေက ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက်ရမယ့် မနက်ဖြန်တွေအတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ….
Sony Xperia X8 ကို Root ဖောက်မယ်… Custom Rom 2.3.7 တင်မယ်…..
ဒီ Post လေးကို ကျွှန်တော် Blog လေးစတင်ထောင်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးရေးခဲ့တဲ့ Post လေးဖြစ်ပါတယ်… အခုပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်… လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ… ကဲအရင်ဆုံးဒါလေးအရင် ဒေါင်းလိုက်ပါမယ်…. SOC 1.65@MMSD အရင်ဆုံး ROOT လုပ်မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းလုပ်ရမှာကတော့ဒါတွေပါပဲ။ ၁။ Devolopment ထဲက USB Debugging ကိုအမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။ ၂။ Applications ထဲက Unknown Sources ကိုအမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။ ၃။ ပြီးရင် Computer ထဲကို Sony Driver သွင်းလိုက်ပါ။ ၄။ ROOT လုပ်မဲ့ TOOL ကတော့ Super One Click နဲ့ လုပ်ရမှာပေါ့။တစ်ခြားဟာတွေနဲ့လဲရပါတယ်။ Super One Click ကပိုပြီးတော့လွယ်မှာပါ။ ၅။ Super One Click ကို […]
Huawei U8520 Firmware list
ကဲ ကိုကို တို့ မမ တို့ လဲ သိပြီးနေလောက်ပြီပေါ့ နော် သူငယ်ချင်းတယောက်တောင်းလို့ တင်ပေးလိုက်ရတာ ပါ။ ညီနေမကောင်းလို့ ပါ အမှားပါရင်တောင်းပန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ လဲ ကြိုးစားပြီးတင်ပေးလိုက်ပါ တယ် ။ http://www.mediafire.com/download.php?n9ia6j26k9epalb ဒါကpart 1 ပါ http://www.mediafire.com/download.php?s37hsbqe22u9579 ဒါကpart2ပါ http://www.mediafire.com/view/?mc5dq01idccjhjc ဒါကfirmwareရေးနည်း guideပါ ကဲလိုချင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများနဲ့ ကိုကိုမမတို့ အတွက်ပါ။
S2 GT-i9100G Dead boot Repair လုပ်နည်းလေးပါ
အပေါ်ပုံအတိုင်း ပေါ်နေလို့စိတ်ညစ်နေလာ စိတ်မညစ်ပါနဲ့ အားလုံးအစဉ်ပြေသွားမယ် ကျွန်တော် ကတော့ 8 ရက်လောက်ခေါင်းကိုက်သွားတယ် အစဉ်ပြေသွားတော့ လဲ 10 မိနစ်ဘဲ ကြာလိုက်တယ် ဖုန်း နဲ့pc နဲ့ဘာမှကို မသိတော့တဲ့ ဖုန်းကို လုပ်မှာနော် ကဲလိုဒါလေး ကို အရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ Samsung I9100G via USB ကိုဒီမှာဒေါင်းပါ Samsung I9100G via USB (Mediafire) Samsung I9100G via USB (DropBox) (password : chitsanmg19 ) ‘D နာမည်းကိုတွေရင်သိကြမှာပါ ဘယ်သူလဲဆိုဒါ ရလာတဲ့zip ကိုဖြည်လိုက်ပါ Samsung […]
huawei c8812 အတွက်နောက်ဆုံးထွက် C8812,Android 4.0,V100R001C92B948 လေးပါ
huawei ဘော်ဒါတွေနောက်လာတဲ.အလုံးတွေ ဖိုင်းဝဲေ၇းရင် first step မှာတင်တန်.တန်.သွားတာတွေအတွက်ပါ .၄၀၇ mb ရှိပါတယ်..ေ ဒါင်းချင်တဲ.သူများဒီမှာယူလိုက်နော် Download Here နည်းပညာနှင်တခြားသူများကို အကျိူးပြုပါ….ဇော်
Huawei U8860 Honor Firmware List
ကဲ ဒီတစ်ခါလည်း MMSD ချစ်သူတွေအတွက် U8860 Firmware လေးတွေကို စုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်…. U8860 V100R001C00B909SP02 (female subject Customised) U8860 V100R001C17B866b (China Unicom) U8860 V100R001C00B977 (China) U8860 V100R001C00B866SP01(Normal)05010PUU U8860 V100R001C394B865SP01(Malaysia Only) U8860 V100R001CHNC00B876 (Chinese channels) U8860 ICS 4.0 Cambodia Demo version U8860V100R001C379B860(General Version) U8860V100R001C379B875(Chinese Version) U8860 V100R001C00B913SP01 U8860 V100R001CHNC00B919 Huawei Honor Ice-Cream Sandwich (4.0.3) firmware (Malaysia Version) (TRIAL VERSION) U8860 V100R001C17B923SP03(China […]